Intombazana nganye ebomini yabona umzuzu olandelayo - ukuphulaphula ubudlelwane kunye nomfana, kunye nantoni na.
Emva kwamagama akhe - kufuneka sihambe-ungena kwiimeko ezingenakuqondakala. Yintoni ongayenza ngokulandelayo? Ungaphila ngaphandle kwakhe nangamehlo akhe? Ndingubani na?
Unqumle inombolo yefowuni yomhlobo wakho omhle ngeenkcazo ezicacileyo zazo zonke iziphoso zakho zangaphambili, ukhale njalo kwaye, ngokuqhelekileyo, sisondele kwimeko yokudakumba okukhulu.
Yintoni endiyenzayo xa ndithandwa ngumhlobo wam? Funda ngokucophelela imiyalelo yethu kwaye ukhumbule - ubomi abupheli!
Yintoni enokuyenza xa umntu ephosa kwaye uyamthanda
Ukuba ufuna ukukhala, khala. Kodwa, ukungcwaba nokuzisola, uvumelekile kuphela usuku olulodwa. Qaphela ukuba ngomso, xa uvula amehlo akho, uya kuvuka ngobomi obutsha. Ewe, namhlanje ukhalela impilo, ngamanye amaxesha inceda kakhulu.
Yintoni eyenza ukuba ucinge ukuba inyaniso yokuba umhlobo wakho uyashiywe yinto ebalulekileyo ebomini bakho? Zibukele kwisibuko: usemncinci, umhle, ukhaliphile. Wonke umntu oqhelekileyo amaphupha aloo ntombazana. Yaye inyaniso yokuba yakho yangaphambili isuke kuwe - uyambulela kuye, ukuba wakusindisa ebusweni bakhe.
Kholelwa kuwe kunye namandla akho. Ungazivali kwilizwe lakho uze udilize unesihawu esingenamkhawulo. Ngokuchaseneyo, qala ukuhlala ubomi obupheleleyo. Ukuba umntu othandekayo uphonswa, akusiyo isizathu sokubeka umnqamlezo.
Hamba nabahlobo kwi-cinema, tyelela umboniso. Ekugqibeleni ukubandakanya kwimidlalo ye-equestrian okanye ukuthatha inxaxheba kwiikhosi ze-striptease-yenza into enyanqatshelwe ngayo ubudlelwane nomntu.
Ukhululekile ngoku! Yonke into engenzekiyo, ibe ngcono. Le ndoda yakuphonsa, kodwa endaweni yakhe iya kufika enye. Kwaye, mhlawumbi, uya kudibana novuyo lwakho.
Khumbula ukuba bekude kangakanani ukuthetha nabazali kunye nezihlobo. Yonke ngenxa yokuba ixesha lakho lonke lidla ubudlelwane bakho kunye nomfana. Ngoku ukuba ukhululekile kumsebenzi we "conjugal", unelungelo lokwenza ixesha elilahlekileyo. Mema abazali bakho kwisidlo seentsapho okanye uthenge izipho uze kubo. Uya kuzisa wena kunye nabantu bakho abasondeleyo nabathandekayo. Ngendlela, ngabazali abanakuze bakushiye kunye nayiphi na ingxaki onokuhlala ufika kubo.
Yilungiselele wena kunye nabahlobo bakho umkhosi omkhulu. Vele uqoke kwaye ujabule. Hlela ukuhlaselwa kobudlelwane bakho bokuqala. Kwaye, ungacingi ngokudabuka okanye ukukhala ngalobu busuku - ngokuchaseneyo, nwabele yonke iminithi ngalolo busuku. Ukuphosa othandekayo - makube isizathu sokuzonwabisa.
Hamba ukuthenga. Ukuthenga - yile ndlela eyayibuyisela ebomini kwanomntu odandathekileyo. Ungalondolozi iinyawo zakho kunye nemali-kuba isenzo sifanele. Isiphumo kukuba uhlaziywa, uhle kwaye unamehlo aqabileyo.
Ukudlala ngothando kunye nokwenziwa kwamehlo. Nangona okwangoku awufuni ukuba nolwalamano olutsha okanye nokuba ngumtshato omncinane. Kuyafaneleka. Kodwa, ingqwalasela kunye nokumamatheka kwabantu, kuya kuphakamisa indlela ovakalelwa ngayo kunye nokuzithemba.
Yintoni endiyenzayo xa ndithandayo? Qhubeka uhlala kwaye ujabule kwimizuzu yonke eyenzekayo kuwe. Jabulela ukuba emva kokudlula ekungcatshisweni komntu othandekayo, ngenxa yentukuzelo kunye neinyembezi, uya kuba namandla. Umntu oqinileyo akayi kulahleka ebomini.
Musa ukujonga izizathu ezenza ukuba iqabane lakho lishiye. Wonke umntu uneempazamo zakhe, kodwa ukuba umfana wakho engenayo ingqiqo okanye isibindi sokuthetha nawe kwaye uzama ukugcina ubudlelwane bakhe, ke le yisigqibo sakhe. Akufanele uphendule ngenxa yezenzo zabanye ngokuzithemba kwakho.
Ungaze ucinezeleke! Zisoloko uzithandayo - lo ngumgaqo obalulekileyo kunayo nayiphi intombazana. Ngaphandle kokuzithemba, awuyi kuvuya.
Uphosa othandekayo? Mxelele kuye kwaye ulungiselele intlanganiso kunye nolonwabo lwenene!
Iireveli zeeholide, kutheni zenzeka kwimpilo yethu
Iingxaki: ukunyaniseka kwintsapho
Indlela yokuphila emva kokungcatshiswa komntu othandekayo
Ndiyakuvuyela umntwana evela eSanta Claus
Ukuguqulwa kwamanqaku okudala
I-Porn: imbali yoshishino oluthandwayo
ECapepe nge salmon
Imigqomo yezocansi: Ziziphi izinto ezizithandayo?
I-skewers yenkukhu ne-ananaspa salsa
Inja Enhle ne Ketchup
Uxhomekeke njani kwi-femalegasgasm?